I-t-mobile & apos; i-honeymoon kunye nesitya ngaphezulu, njengoko isivumelwano sokunyusa sibanjelwe ukubanjwa zii-5g zenethiwekhi zokuqeshisa
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo I-T-Mobile kunye neapos; iholide yabatshatileyo kunye ne-DISH ngaphezulu, njengoko isivumelwano sokunyusa sibanjelwe ukubanjwa zii-5G
I-T-Mobile kunye neapos; iholide yabatshatileyo kunye ne-DISH ngaphezulu, njengoko isivumelwano sokunyusa sibanjelwe ukubanjwa zii-5G
Ezo satellite ze-honchos ezivela Isitya ngubani oye ngaphambili kwi-T-Mobile kunye I-Sprint Ukudibanisa inkcaso, evakalisa ukubekeka kwindawo ethile malunga nokuncitshiswa kokhuphiswano kunye nokunyusa amaxabiso phambi kweFCC, yavula idime xa benikwa abathwali ababesele behlawulelwe i-T-Mobile kunye ne-Sprint.
Ukunyusa, iMetro, iVirgin- la ngamagama ahlawulwayo asekhaya kunye nezigidi zababhalisi kunye nokwaziwa kwangoko kwegama, kunye neDish kwangoko yakrolela iimpahla. IKhomishini yoNxibelelwano yeFederal yafakwa ukuze i-T-Mobile kunye ne-Sprint zibe nethuba lokuba ukudibana kudlule, kwaye kubonakala ngathi ihlawulwe kwangaphambili yindlela. I-Sprint kunye ne-T-Mobile ngokudibeneyo ibambe ngaphezulu kwe-40% yemarike yokuhlawula njengoko usiya, ilandelwa yi-TracFone ye-agnostic ene-32%, kunye neCricket ene-25%, kwaye ngoku isixa esikhulu semarike ehlawulelwa kwangaphambili kufuneka yenziwe yiDish njengabathengi bayo.
I-Sprint & apos; ukuhlawulwa kwangaphambili, kunye ne-Boost kunye neVirgin Mobile brand kwafuneka zikhutshelwe, ngokwezivumelwano zokudityaniswa, ukuze zilungele ukudityaniswa kunye neemfuno zokunqanda ukuthembana. Abathengi beVirgin & apos; babesele besongelwe kwangaphambili kwiBoost kwangaphambili, ukuze bobabini banokudluliselwa kwiDish, ngokuyimpumelelo bakha umphathi wesine okude kwakhona malunga nezigidi ezili-10 zeengcingo ezingenazingcingo esele zikhona, ukuba awubali ababhalisi beTV abazizigidi ezili-12.
Emva kokufumana amashishini ahlawulwa kwangaphambili eSprint kunye nabathengi, iDish ngoku inikwe ukufikelela kwinethiwekhi yesiphumo Umphathi omtsha weT-Mobile kungabikho ngaphantsi kweminyaka esixhenxe, ukongeza kwithuba lokuzakhela uthungelwano lwebhendi ebanzi ye5G. Ingxaki? Umsebenzi wothungelwano usakhiwa, kwaye isivumelwano se-Boost asenziwanga kwaye asenziwanga uthuli.
Isivumelwano esikhuthazayo seFowuni asinazo ii-apos; azivalwanga yiDish
Isivumelwano sikarhulumente kunye ne-Dish yayikukuthenga i-Boost kunye ne-Virgin-derived subs-dollar eyi-1.4 yezigidigidi. Umhla wokugqibela ophakanyisiweyo we-1 kaJuni weza wadlula, kwaye igama lomama kunye nelokufumana izinto, njengoko kungenjalo iDish iya kuthi & apos; sikhwaze siphezulu eluphahleni ukuba ngoku sisiphatho esine-swanky ye-4 kwimo ethandwayo yangaphantsi.
Kusekho ixesha kude kube nguJulayi 1 ophawula iintsuku ezingama-90 ukusukela oko ukugqitywa kokudityaniswa kwamenyezelwa kodwa imiqobo yobuchwephesha yokudityaniswa iya kucinezela ngakumbi ukwenza ngexesha elifutshane eliseleyo. Ngokuka-Dish co-founder kunye noSihlalo uCharlie Ergen kwinkomfa yekota nganye kunye nabahlalutyi: 'Asifuni ukuba sibuyele umva kwaye asifuni ukubeka abantu kwinethiwekhi yeSprint, emva koko kufuneka sibuyele umva siyitshintshe kamva, kunye neendleko zokutshintsha kamva kwinethiwekhi yeT-Mobile ...[kuthetha]Unomdla ongaphezulu ... Ke loo meko ayikazaliseki. '
Kukho okungakumbi kuyo, nangona kunjalo, kwaye ayisiyiyo nje iDish efuna ukwenza okungcono kubabhalisi babo bexesha elizayo ngaphandle kokubabuyisela phakathi kwe-Sprint, apho i-Boost ivela khona, kunye nenethiwekhi entsha yeT-Mobile xa i & apos; phezulu kunye yiyo. Ngokwabahlalutyi beLightShed bathethela Ngqindilili , ixesha lokutshata kwi-Dish kunye ne-T-Mobile liphelile, kwaye kukho izikhalazo ngoku malunga ne-600MHz yokuqeshisa i-spectrum.
Uluvo lwabo kukuba i-T-Mobile kufuneka izabalazele ukuqeshisa zonke ii-Dish & apos; ii-asethi ezingama-600MHz ezingekho ngaphezulu kwe- $ 350 yezigidi ngonyaka, kwaye ikhontrakthi yoqeshiso kufuneka ibeneminyaka emithathu ubuncinci. Isitya ngokucacileyo sikhwela ixesha laso, kwaye sifuna ukufumana isivumelwano esivumayo sokuqeshisa ngaphambi kokuba sivale ukufunyanwa kweBoost kwaye sizise yonke inkqubo, ukuze iT-Mobile igxile ekwakheni inethiwekhi yayo entsha ye-5G.
Isitya ngokucacileyo sizimisele ukudibanisa le micimbi mibini ibonakala ngathi yahlukene kunye, kwaye sinokubhengeza ukuvalwa kwesivumelwano sokunyusa, kunye nesivumelwano sokuqeshisa isibonakaliso sayo esinqwenelekayo kwinto enye. Ingxelo sele isayinile 'amakhulu engqeshiso' yeenqaba esele zikho, ngokutsho kwabahlalutyi base Wells Fargo, kwaye abaphumelelanga ukwenza ubomi kukhuphiswano lwayo lwexesha elizayo lube lula.
usetyenziso olufana neligi yeentsomi
ipad mini 5 ngolwesihlanu omnyama 2019
Ukujonga kuqala i-iOS 13.4: ukubuyisa i-intanethi, ukuYila kwakhona ii-imeyile kunye nabanye
Isalathiso esikhawulezayo se-SQL: Uninzi lweeMiyalelo eziqhelekileyo ze-SQL
I-LG V10 iqala ukufumana uhlaziyo lwe-Android 7.0 Nougat
Iimodeli ze-Apple iPhone 12-ukuthelekisa, ii-specs, kwaye yeyiphi eyona ilungele wena
Ngaba kufuneka abasebenzisi be-iPhone 8 Plus baphucule kwi-iPhone XR? Iintlanu kunye neengozi
IMetroPCS ibonelela ngee-smartphones zasimahla ze-Android xa utshintshela kwisicwangciso sayo seLTE esingenamda
I-inshurensi yefowuni ephathekayo xa ithelekiswa nokulungiswa- zongeza njani iindleko?
Imidlalo emi-5 eyoyikekayo yeNFL ye-Android kunye ne-iOS